Maxamed Mursal Cabdiraxmaan oo ku guuleystey doorashadii afhayeenka Baarlamaanka | Bosaso Media News
Maxamed Mursal Cabdiraxmaan oo ku guuleystey doorashadii afhayeenka Baarlamaanka
Xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ku guuleystey dorashadii afhayeenka Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda, kadib markii uu wareegii labaad uga adkaadey Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow.
Doorashada ayaa martey laba wareeg oo keliya, iyada oo wareegii kowaad ay ka soo baxeen afar musharax, waxaana wareegii labaad ka tanaasuley Xildhibaan Shariif Maamuud iyo Xildhibaan Cabdicasiis Lafta-Gareen.
Xildhibaan Maxmed Mursal ayaa wareegii labaad helay codad gaaraya 147 cod, halka musharaxa la tartamaayey Ibraahim Isaaq Yarow uu helay 118 cod oo keliya, iyada oo tirada guud ee Xildhibaanadu ahayd 266.
Xildhibaanka laga guuleystey Ibraahim Isaaq Yarrow ayaa u hambalyeeyey musharaxa guuleystey, waxaana uu ku nuux-nuuxsadey in madaxda federaalku ay farogelisey doorashada o ay dhinac martey isaga oo hadalkiisa si sarbeeb ah u dhigay.
Xildhibaan Mursal afhayeenka cusub ee baarlamaanka ayaa horey u soo noqdey safiirkii Soomaaliya u fadhin jirey dalka Turkiga, kadibna waxa uu noqdey Wasiirka Gaashaandhigga dhamaadkii 2017, kadib markii wasiirkii xilkaas hayey is-casiley. Afhayeenka cusub ayaa isaguna iska casiley Wasiirkii gaashaandhigga si uu xilkan ugu tartamo.
Xildhibaan Mursal ayaa la wareegaya xilka Baarlamaanka oo la aaminsan yahay in uu si weyn ugu kala qaybsamey moshinkii ka dhanka ahaa afhayeenkii lagu cadaadiyey in uu is-casilo Jawaari, waxaana u taala shaqo adag oo ay ugu horeyso, Dastuurka federaaalka oo la qaybiyo-tiro aftina loo qaado, Sharciyada Xukuumaddu u soo gudbisey iyo shaqooyin badan oo baarlamaanku ka gaabiyey oo ay ugu horeyso la xisaabtanka xukuumadda.